Should You Wear Underwear To Sleep ? - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ပူပြင်းတဲ့ နွေရာသီညတွေမှာ အိပ်စက်ချိန်တွင် မိမိအတွင်းခံဝတ်လျက် အိပ်သင့်မအိပ်သင့် ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေး ပြောပြချင်ပါတယ်… ညအိပ်ရာဝင်ချိန်မှာ တချို့က. Pajama ၊ တီရှပ် ၊ ပုဆိုး စသဖြင့် ဝတ်ဆင်ပြီး အိပ်တတ်ကြပါတယ်.. သို့သော် မိမိအတွင်းခံကို ဝတ်လျက်သားအိပ်ကြသလို ချွတ်ပြီး အိပ်ကြတာလဲ ရှိပါတယ်.. ဒီတော့ကာ
📌ဝတ်အိပ်ခြင်း မအိပ်ခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးက ဘာတွေလဲ ❓
တချို့အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အတွင်းခံမပါပဲ အိပ်စက်ခြင်းကို မနှစ်သက်ပါက cotton(ဝါဂွမ်း)ဖြင့် ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပွပွယောင်းယောင်းအတွင်းခံမျိုး ဝတ်ဆင်ပါ.. ထို့မှသာ ချွေးထွက်များသော်လဲ စုပ်ယူမှု အားကောင်းတဲ့အတွက် မိန်းမကိုယ်တဝိုက်ကို ခြောက်သွေ့နေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်… ပိုးသား၊ချည်သားတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ အတွင်းခံကို ဝတ်ဆင်ပါက တခါတရံမှာ ယားယံတာမျိုးတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်…ဒါပြင့် အမျိုးသမီးတွေဖို့ ရှောင်လွဲမရတဲ့ လစဉ် ဓမ္မတာ လာတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ လိုအပ်တဲ့ လစဉ်သုံး pads တွေ tampons တွေ အသုံးပြုရလေ့ ရှိသလို ညအိပ်ရာဝင်တဲ့အခါ ပေပွတာမျိုး မဖြစ်အောင် အတွင်းခံကို ဝတ်အိပ်တတ်ကြပေမယ့်… အတွင်းခံကို လုံလုံလောက်လောက်လဲှလည်ခြင်း၊ လစဉ်သုံးပစ္စည်းကို တစ်ခုတည်း ကြာရှည်မသုံးစွဲခြင်း စသဖြင့် ဂရုစိုက်ရပါမယ်…
👨‍💼 အမျိုးသားများအနေဖြင့် အလွန်ကြပ်သော အတွင်းခံတွေ ဂျင်းဘောင်းဘီတွေကို နေ့အခါမှာလည်း မဝတ်ဆင်သင့်သလို ညမှာလဲ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ ပုဆိုး၊ ဘောင်းဘီတို စသဖြင့် လှဲလယ်ဝတ်ဆင်ပြီး အိပ်သင့်ပါတယ်… အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တင်းကြပ်တဲ့အခါမှာ အပူချိန်ဟာ မြင့်တက်လာပြီး ဝှေးစေ့နဲ့ အတွင့်မှာ ရှိတဲ့ သုတ်ပိုးကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တချို့က ထောက်ပြထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်… အမျိုးသားဖြစ်စေ အမျိုးသမီးဖြစ်စေ လုံလောက်တဲ့ တကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းမှု ရှိခြင်းအားဖြင့် အရေပြားနဲ့ သက်ဆိုင်သော ကျန်းမာရေးပြသနာများကို ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်…ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး လှပသန်စွမ်းသော အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ ဖြစ်ကြပါစေလို့ တောင်းဆု မေတ္တာပြုလျက်….